Ingxelo yoShishino lweHotele yowama-2022
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Icandelo lokungenisa izihambi » Ingxelo yoShishino lweHotele yowama-2022
23 imiz efundwayo
Kangangonyaka ka-2020 ibingunyaka wamanzi kwishishini lehotele, kwakunjalo ngo-2021. Ngelixa ubhubhane uqhubeka, ishishini laqala ukuvela kwakhona, likhuthazwa kukusasazwa kogonyo lwesizwe kunye nethemba labathengi. Umbutho we-American Hotel and Lodging Association wokuqala wengxelo yoShishino lweeHotele, okhutshwe ngoJanuwari ka-2022, ubonise indlela elinokuqina ngayo ishishini lehotele kunye noqikelelo oluza kwenzeka kubanini beehotele nabaqhubi, abasebenzi kunye nabahambi.
Kunyaka omnye kamva, izitofu zokugonya ziyafumaneka kuye nabani na waseMelika oneminyaka emihlanu nangaphezulu, kwaye i-63% yabemi base-US igonywe ngokupheleleyo.
Nangona kunjalo iimeko ziyenyuka, njengoko kuxhalabile malunga nokwahluka kwentsholongwane entsha kunye nokuqhambuka.
Inyani yeyokuba i-COVID-19 iyaqhubeka nokuphembelela ubomi bemihla ngemihla - kwaye oku kuhlalisana kuya kuba yinto eqhelekileyo kwikamva elibonakalayo. Intsholongwane iphantsi kweziphumo zengxelo yeSimo soShishino lweeHotele kulo nyaka, ezibandakanya
Uqikelelo lwentsingiselo yoqoqosho olukhulu kunye notshintsho olulindelekileyo kubathengi kunye noshishino
Inqanaba elilandelayo lokubuyisela liya kuba lingalingani, linokuthi liguquke. Kodwa inye into esele iqinisekile: i-2022 ngunyaka womhambi "omtsha".
Uhambo oluyonwabileyo-oko kukuthi, ukudibanisa ishishini kunye nohambo lokuzonwabisa-kuqhume ngexesha lobhubhani, kubonisa utshintsho olukhulu kwizimo zengqondo zabathengi kunye nokuziphatha okunxulumene nokuhamba. Oku, kwakhona, kuya kuba nefuthe elibonakalayo kwimisebenzi yehotele njengoko ishishini liphendula ukuhlangabezana neemfuno kunye nokulindela kwiindwendwe zalo.
Zonke izinto ezibonisa ukuba ishishini lehotele liya kuqhubeka lisiya ekuchacheni ngo-2022, kodwa ukuchacha ngokupheleleyo kuseneminyaka emininzi kude. Ngokutsho
kuhlalutyo lwe-AHLA yi-Oxford Economics, imfuno yegumbi lehotele ebusuku kunye nengeniso yegumbi kuqikelelwa ukuba phantse ibuyele kumanqanaba ka-2019
Ingeniso yegumbi kulindeleke ukuba ifikelele kwi-168 yeebhiliyoni zeedola, ngaphakathi kwe-1% yamanani ka-2019 kunye
ukwanda kwe-19% xa kuthelekiswa no-2021. Ukuhlala kuqikelelwa ukuba kubethe i-63.4%, isondele kwireyithi ye-66.0% efunyenwe ngo-2019 kwaye ingaphezulu kakhulu kwe-44% kunye ne-57.6% efikelelwe ngo-2020 no-2021, ngokulandelelanayo.
Ukubuyiswa kwengeniso yegumbi ngokuqinisekileyo ziindaba ezamkelekileyo kubanikazi behotele, ukanti kunjalo
ungalibali lonke ibali.
Nokuba imbuyekezo yokusebenza kwengeniso yegumbi laphambi kobhubhane, la manani awabandakanyi imali eyongezelelweyo eqikelelwa ngaphezulu kwe-48 yeebhiliyoni zeedola kwinkcitho yangaphambi kobhubhani kukutya nesiselo, indawo yokuhlangana, kunye nezinye iinkonzo ezincedisayo-umthombo wengeniso olindeleke ukuba ushiyeke kakhulu. kwimbuyekezo yayo. Iingcali kushishino ziprojekthi nje ngaphezulu kancinane kwesiqingatha seentlanganiso kunye nemisitho eza kubuya ngo-5, 2022 kunye neempembelelo ezingalunganga zokwahluka kwe-Omicron ekusafuneka kumiselwe.
Ukongeza, iihotele kwilizwe lonke ziyaqhubeka nokumba ukusuka kwisithuba seminyaka emibini apho ziphulukene ne-111.8 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yegumbi kuphela. abasebenzi, utyalo-mali ekuphuculweni kwepropathi okulibaziseko, kwaye uzalise kwakhona oovimba bemali yoshishino.
Kuhlala kukho imimoya eyomeleleyo kunye nabaphazamisi abanokuthi bafumaneke ngokupheleleyo. Ngelixa uhambo lokuzonwabisa lunokubuya ngokupheleleyo ngo-2022, uhambo lweshishini kuqikelelwa ukuba luza kuhlala lusezantsi kakhulu kumanqanaba angaphambi kobhubhane. Ubuzaza beziphumo zexesha elifutshane ze-Omicron kwishishini lehotele abukacaci.
Ngaphezu koko, ukwahluka kwexesha elizayo kuya kudala ukuguquguquka kokubini ukubuya kolonwabo kunye nohambo lweshishini kunye namashumi eebhiliyoni zeedola ezinxulumene neentlanganiso kunye nenkcitho yemisitho. NgokweNgxelo ye-Cvent kaNovemba ka-2021 yeQela leBusiness Insights, ikota enye yeentlanganiso ezifunyenweyo ziyingxubevange, kwaye i-72% yabacwangcisi beentlanganiso abaphononongwayo bakhangela imisitho ngecandelo lomntu.
Iihotele ziya kuqhubeka nokusokola ukunqongophala kwabasebenzi, ukunciphisa amandla abo okunyusa ingeniso evela kubakhenkethi abanokubakho. Uxinzelelo lokunyuka kwamaxabiso luthetha ukuba nangona ukubuyiswa okuqhelekileyo kunokwenzeka ngaphambili, ukubuyiswa kokulungelelaniswa kwenyani kwishishini kuya kuthatha kude kube yi-2025, ngokwe-STR kunye ne-Tourism Economics.
Ngelixa ukuchacha kokwenyani kumanqanaba angaphambi kobhubhane kuseneminyaka eliqela kude, kokukhona iihotele ziqonda, zilungiselela, kwaye zisabela kwiimfuno zomhambi “omtsha”, kokukhona ikamva lijonge kumzi-mveliso obalulekileyo eMelika. uqoqosho.
Imbonakalo yokuhamba ngo-2022 ihamba kakuhle, kodwa iyaqhubeka
ukuguquguquka kulindeleke, kunye neminyaka yokuchacha ngokupheleleyo kude. Amaxabiso okuhlala
kunye nengeniso yegumbi kuqikelelwa ukuba isondele kumanqanaba angama-2019 ngo-2022, kodwa i
imbonakalo yengeniso encedisayo ayinathemba kangako. Uhambo lweshishini lulindelwe
ukuhlala phantsi ngaphezulu kwe-20% ixesha elininzi lonyaka, kuphela i-58% ye
iintlanganiso kunye nemisitho kulindeleke ukuba zibuye, kunye neziphumo ezibi ngokupheleleyo
I-Omicron ayikaziwa okwangoku. Iintloko zabasebenzi ziya kuthetha amanqanaba engqesho
ekupheleni konyaka iza kuba phantsi nge-7% xa kuthelekiswa no-2019.
Abakhenkethi "abatsha" balindele izinto ezahlukeneyo kwiimpawu zehotele. Abathengi'
Iimpembelelo, indlela yokuziphatha, kunye nolindelo zonke zitshintshile ngexesha lobhubhane-
itshintsha kakhulu indlela iihotele ezisebenza ngayo ukuze zanelise iindwendwe zazo, ezi
ngokwandayo kungenzeka ukuba babe ngabakhenkethi bolonwabo okanye bolonwabo okanye abahambi bedijithali. Njenge
ngenxa yoko, iteknoloji iya kuba ibaluleke ngakumbi kwimpumelelo yepropathi.
Ukugcina kunye nokutsala italente ephezulu kuthetha ukubonisa iindlela zomsebenzi,
hayi imisebenzi kuphela. Iihotele zingakha abasebenzi bexesha elizayo nge
ukunxibelelana ngobubanzi bamathuba omsebenzi akhoyo kwi
kushishino kubasebenzi bangoku kunye nabo balindelekileyo.
Amanyathelo ozinzo aya kudlala indima ebaluleke kakhulu
ishishini. Iihotele ezenza izibophelelo kwiinjongo zozinzo kunye
iinkqubo azanelisi nje ulindelo lweendwendwe, ziyazenza
utshintsho olulungele ishishini ngokunjalo.
Iiprogram zokunyaniseka ziya kuguqukela kumbono omtsha wokuhamba.
Nge high-volume ukuhamba ishishini phantsi, iinkqubo ukunyaniseka zemveli no
ixesha elide ukwenza ingqiqo. Iiprogram zokunyaniseka ezisebenzayo kakhulu ziya kunika ngakumbi
imbuyekezo eyenzelwe wena ehlangabezana neemfuno zabahambi ngezoshishino ngamaxesha athile
nabakhenkethi bolonwabo ngokunjalo.
UKULUNGISELELA UHAMBO OKUQHUBEKAYO, KODWA KUHLALA LUVUTHA
Ukuguquguquka kokuhamba ngexesha lobhubhane kwenza uqikelelo lokuhamba lubaluleke ngakumbi-kodwa lube nzima kakhulu kunangaphambili. Ngaba abantu bayafuna ukuhamba? Ngaba izicwangciso zabo zokuhamba ziya kuthotywa ziimeko zoqoqosho ngokubanzi? Ngaba imiqathango yokuhamba ekhaya okanye kwindawo abasingise kuyo ibanyanzela ukuba batshintshe izicwangciso zabo?
Ngamafutshane, ukulungela uhambo kubonisa indlela abantu abakulungele ngayo ukuthatha uhambo. Ukuqonda ukulungela uhambo namhlanje, siye saya kwi-Accenture Travel Readiness Index, indlela entsha yokuvavanya injongo yokuhamba ngokufanelekileyo kwindalo yohambo lwanamhlanje. Isalathiso senyanga, samazwe amaninzi silandelela zombini izikhombisi zokuhamba nezingezizo ezohambo eziphembelela injongo ebandakanya imeko yezempilo yelizwe enxulumene ne-COVID-19, iimeko zoqoqosho lwexeshana elifutshane, imfuno yokuhamba, kunye nobume bokushukuma. Ezi zalathi zilinganiswe ukubonakalisa ubungakanani bempembelelo yazo ekulungelweni kohambo.
Ukulungela luJoliso oluPhumayo
I-Index ihlaziywa inyanga nenyanga ngenxa yokuba ukulungela ukuhamba akukho ngokupheleleyo. Oku kuya kuba yinyani okoko ubhubhane ungalawulwa ngokupheleleyo kwaye amaza amatsha, ukwahluka, kunye neempendulo zikarhulumente kunye nezempilo yoluntu zihlala ziseta ngokutsha ukuthembela kwabantu kunye nokuzithemba ekuhambeni. Umzekelo, cinga ukuba kwakhawuleza kangakanani na uthintelo lokuhamba kumazwe ehlabathi xa ukwahluka kwe-Omicron kwavela ngasekupheleni kuka-2021. Umbutho wezeMpilo weHlabathi uchaze into eyahlukileyo nge-26 kaNovemba, 2021, nangomhla wesi-2 kuDisemba, 2021, uMongameli. I-Biden ibhengeze imigaqo emitsha yokuhamba kumazwe ngamazwe.
Iindlela zokulungela ukuhamba kwisiqingatha sesibini sika-2021 ziyafundisa ukuba yintoni ekufuneka yenziwe
lindela ngo-2022: umfutho ezipokothweni udityaniswa nokumisa kwaye uqalwa kubangelwa
enye okanye ngaphezulu izalathi zokuhamba.
Ngemfuno yokungena kunye nabantu abaninzi abakhetha ukuhamba okanye ukubuyela kubomi bemihla ngemihla benentsholongwane phakathi kwabo, ukulungela ukuhamba kubone ukutsiba kwe-5% ngoSeptemba ka-2021 xa kuthelekiswa no-Agasti ka-2021 kwihlabathi liphela. Nangona kunjalo, iindlela zokulungela zahlala ziguquguquka ukuphela konyaka. EyeNkanga ka-2021 ifumene ukuhla kwe-2% ukusuka kwinyanga edlulileyo ngenxa yokuqhambuka kunye nezithintelo ezintsha zokuhamba. Ukulungela kukonke kwi
EyeNkanga ka-2021 ibingama-23% ngaphantsi kwesiseko sika-2019.
NgoSeptemba ka-2021, imakethi yase-US yehle nge-3% ngo-Agasti ka-2021 ngenxa yezithintelo ezingqongqo kubakhenkethi bamanye amazwe. Ukuhamba kweenqwelomoya kunye nokuhlala kwehotele kulandele ipateni yembali, ukuwa emva kwehlobo elinamandla kakhulu kunye nokubonisa amandla ekwindla. Ukuhlolwa koLawulo loKhuseleko lwezoThutho (TSA) kwanda kakhulu ngoJulayi ngaphezulu nje kwezigidi ezi-2 zabakhweli beenqwelomoya, kwaye iihotele zafikelela kwi-71% yokuhlala.
NgoNovemba, ukucuthwa kwezithintelo zokuhamba zaseYurophu ukuya e-United States kuqhube ukonyuka okukhulu kumthamo weenqwelomoya, okuthetha ukwanda kwemfuno.
12 Ilizwe laqhubeka livula uhambo njengoko lalifika ixesha leeholide. Ngapha koko, iveki yoMbulelo ka-2021 yayiyeyophula irekhodi kwiihotele zase-US-amaxabiso okuhlala ayengama-53%, kwaye i-RevPAR yayiphezulu ngama-20% kunexesha elinye ngo-2019.
I-Global Pandemic eneMpembelelo yasekuhlaleni
Ayikokulungela kwabahambi basekhaya kuphela ekufuneka ishishini lehotele liziphendulele njengomqhubi wemfuno ngo-2022. Abakhenkethi bamazwe ngamazwe ngabaphulaphuli ababalulekileyo nabo.
Abakhenkethi bamazwe aphesheya babalelwa kwi-15% yenkcitho yohambo lwase-US iyonke ngo-2019 ngaphambi kokuba ubhubhane uqalise, kodwa yi-6% kuphela ngo-2020.15 Ngo-2022, iWorld Travel & Tourism Council iqikelela i-228% yokutsiba kwinkcitho e-United States ngabakhenkethi bamanye amazwe xa kuthelekiswa noko. 2021.
Ukulungiselela olu hlaselo lunokwenzeka kuthetha ukuvuma ukuba iimvakalelo malunga nokuhamba kunye nokulungela ukuhamba ziya kwahluka kwilizwe nelizwe kuba le ngxaki yehlabathi ibekwe kwindawo ephezulu kwimpembelelo yayo. Iihotele ezicinga malunga nokulungela ngelensi yezinto eziye zafunyanwa ngabantu-kwaye ngoku-zikwimeko engcono yokumisela ukuba zifuna ukwazisa amanyathelo ongezelelweyo ezempilo nokhuseleko ukubhenela kwaba bahambi.
Nantsi into evezwa yi-Index malunga nokulungela ukuhamba kwizinto ekulindeleke ukuba zibe ziimarike ezibalulekileyo zaseMelika.
Ukungaqiniseki okuseleyo malunga nobume bokwahluka kwe-Omicron ngexesha lokupapashwa kubonisa ukuba kunzima kangakanani ukuqikelela ukulungela uhambo ngo-2022. Into esinokuyicingela kukuba izithintelo ezimiselweyo ukulwa nokwahluka kwe-Omicron kusenokwenzeka ukuba zihlale kude kube nguMatshi. Ngaphezu koko, izinto ezininzi zexesha elifutshane zinokuchaphazela ukulungela ukuhamba kakuhle okanye kakubi, kwaye ngokubanzi, asilindelanga ukuba i-Index ibonise iimpawu zokubuyisela kude kube phakathi kwe-2022 ekuqaleni.
INDLELA YOKUBUKELA NGENDLELA YOBUKHALI 2022
Ukulungela ukuhamba kuya kwazisa indlela ishishini lehotele eliqhuba ngayo kwiindawo ezibalulekileyo ezibandakanya ukuhlala, ingeniso yegumbi, ingqesho, kunye nomdla wabathengi. Ngelixa u-2022 engayi kubona ukubuya ngokupheleleyo ku-2019, imbonakalo yomelele kunokuba yayinjalo ngo-2021.
Ukuhlalwa kweehotele kulindeleke ukuba kuqhubeleke nokunyuka ukusuka kwimbali esezantsi ephantsi ka-2020, i-avareji ye-63.4% yonyaka, ngokwe-STR kunye ne-Tourism Economics.
Ngo-2019, phantse iihotele ezingama-60,000 zelizwe ziye zafumana umndilili wokuhlala ehotele ngonyaka wama-66%, zithengisa amagumbi ayi-1.3 yeebhiliyoni. Ubhubhani wenze ukuba ukuhlala kweehotele zase-US kwimbali esezantsi kwe-24.5% ngo-Epreli ka-2020, kwaye ukuhlala ngonyaka kwehle ukuya kuma-44% kulo nyaka. Ukuhlalwa kweehotele ngo-2021 kuqikelelwe phantse kuma-58%-amanqaku amahlanu agcweleyo aphezulu kunoko bekuqikelelwe ngeli xesha kunyaka ophelileyo (uqikelelo lwe-52.5%), kodwa kusehle ngaphezulu kweepesenti ezisibhozo kumanqanaba obhubhane.
Ngelixa ezinye iihotele ezibonelela ngenkonzo epheleleyo ziqala ukusebenza ngokuqhawuka nokuba kukwi-50% yokuhlala, oku akuchazi matyala emali ebolekiweyo kunye nezinye iindleko. Ngenxa yoko, uninzi lweehotele zichithe iminyaka emibini edlulileyo ngaphantsi kwendawo yazo yokuphumla, zixhomekeke koovimba ukuhlawula iindleko. Ke ngokubuyela kwindawo ekufutshane nobhubhane ngo-2022, iihotele zinendlela yokuya ngaphambi kokuchacha ngokwenene. Amazinga okuhlala kuqikelelwa ukuba aqhubeke nokunyuka ngo-2022, umndilili we-63.4% ngonyaka.
Umzobo 1 - Ukuhlala kweGumbi leHotele ngonyaka
Emva kokuwa malunga ne-50% ngo-2020, ingeniso yegumbi lehotele iya phantse ibuyele
Amanqanaba e-2019 kulo nyaka. Inkcitho encedisayo engeyiyo yegumbi iya kuqhubeka isemva.
Phambi kobhubhane, amagumbi eehotele azizigidi ezi-5.4 amagumbi eendwendwe enze ngaphezulu kwe-169 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yegumbi lonyaka, engaquki amashumi eebhiliyoni ezongezelelweyo ezenziwe ngokurenta amagumbi okuhlangana kunye neminye imithombo yengeniso encedisayo.
Ngo-2020, ingeniso yegumbi lehotele yehle malunga ne-50% kulo lonke elase-United States ukuya kwi-85.7 yeebhiliyoni zeedola, emva koko yaphinda yaya kutsho kwi-141.6 yeebhiliyoni zeedola ngo-2021. Oku kuthetha ukuba kule minyaka mibini, iihotele ziphulukene ne-111.8 yeebhiliyoni zeedola kwingeniso yegumbi kuphela. Ingeniso yegumbi kuqikelelwa ukuba iya kufikelela kwi-168.4 yeebhiliyoni zeedola kulo nyaka, okanye phakathi kwepesenti enye yamanqanaba ka-2019.
Imbonakalo yengeniso encedisayo evela kwiintlanganiso, kwimisitho, kunye nokutya kunye neziselo-eziqikelelwa kwiibhiliyoni ezingama-48 zeedola ngonyaka ngaphambi kobhubhane-ayicace kangako. Iiprojekthi ze-Knowland eziya kubuya kuphela ngama-58.3% eentlanganiso kunye nemisitho ngo-2022, kunye ne-86.9% emva ngo-2023, oku kuthetha ukuba uninzi lwaloo ngeniso iya kuqhubeka ingekho.
Umzobo 2 - Ingeniso yeGumbi leHotele ngonyaka
Ekupheleni kuka-2022, iihotele kulindeleke ukuba ziqeshe abantu abazizigidi ezi-2.19-93% yabantu.
amanqanaba abo angaphambi kobhubhane.
Ngo-2019, iihotele zase-US ziqeshe ngokuthe ngqo ngaphezulu kwe-2.3 yezigidi zabantu. Emva kokuhla okubalulekileyo kuka-2020, iihotele zigqibe ngo-2021 zikwi-77% yamanqanaba engqesho ngo-2019.
Nangona ukukhula olomeleleyo kulindeleke kulo nyaka uzayo, iihotele kulindeleke ukuba ziphele ngo-2022 kunye nabasebenzi abazizigidi ezi-2.19-ehle nge-166,000 okanye i-7% xa kuthelekiswa no-2019, ebonisa ukuqhubeka komoya kwimarike yabasebenzi.
Umfanekiso wesi-3 – iNgqesho ngoNyaka
Ukufuna ukutya kwabathengi
Kukho imfuneko engekapheli yohambo-ingakumbi kubahambi abancinci.
Emva kweenyanga zokuvalelwa yedwa kunye nezithintelo zokuhamba ekuqaleni kobhubhane, abantu abaninzi baseMelika babenomdla wokuhamba kwakhona ngo-2021; elo mfuno kulindeleke ukuba liqhubeke kulo nyaka. Ngokutsho kweNgxelo ye-Morning Consult's State of Travel and Hospitality Q4 Report, i-64% yabantu abadala base-US bathi baye bahamba kulo nyaka uphelileyo, kunye nabathengi abancinci nabaphezulu abakhokelayo.
Le ngxelo iphinde yafumanisa ukuba kumazwe asibhozo enziwe uphando, abantu baseMelika babephakathi kwawona anqwenela ukuhamba endleleni, kwaye i-50% ilindele ukuthatha uhambo lokuphumla kwiinyanga ezintandathu ezizayo.
ngokoPhando lokuThenga ngeHolide luka-Accenture luka-2021 lwase-US, i-40% yabathengi base-US baceba ukugxila ekongeni iholide okanye uhambo kwixesha elizayo. Ukugcinela uhambo yeyona nto ibalulekileyo yesibini kubathengi emva kokuhlawula amatyala (Figure
I-43% epheleleyo ilindele ukuhamba kakhulu okanye ngaphezulu kwiinyanga ezintandathu ezizayo kunokuba benzile xa kuthelekiswa nexesha leenyanga ezintandathu ngo-2019.
Umzobo 4 – Abathengi base-US abaPhambili abaPhambili kwezeMali baseMelika aba-5 baPhambili ngo-2022
UGen Z kunye neMillennials bazimisele ngakumbi ukuhamba kwakhona, nangona basafuna ukuqinisekiswa ukwenza oko. Isinye kwisithathu seli qela sikholelwa ukuba ulwazi olusexesheni, ulawulo olungcono lokuhamba kwabahambi, kunye nokukwazi ukubhukisha kunye nokuqinisekisa ubume bogonyo ngokusebenzisa iiapps zenkampani yokuhamba kuya kubacenga ukuba baphinde bahambe.
Oku ngakumbi: Millennials | Uhlaziyo | Accenture | impilo | Umbutho | umbulelo | ishishini | beenqwelo | Covid-19 | Uhambo loshishino | Tourism | ububele | World Health Organization | ihotele | eunited States | Ulawulo loKhuselo loKhuseleko | Employment
Ityala lokuqala lemonkeypox lakwaSirayeli lichazwe emva kohambo lwaseYurophu impilo, World Health Organization|
Unyango olutsha oludityanisiweyo lweengxaki ezibangelwa sisifo seswekile kwiCornea impilo|
Usapho Las Vegas indoda wakhanyela unyango umhlaza wawongwa $200M impilo|
Accenture beenqwelo ishishini Uhambo loshishino Covid-19 Employment impilo ububele ihotele Millennials Umbutho Uhlaziyo umbulelo Tourism Ulawulo loKhuselo loKhuseleko eunited States World Health Organization
Umhambi oMtsha: Ukufuna Injongo njengoko iHlabathi liVulwa kwakhona
Unyango olutsha lwaBantu Abadala abaneActive Psoriatic...
ISeychelles Ikhanya kumboniso odumileyo wokuHamba waseDanish
Uncedo olutsha oluhlala ixesha elide kwi-Trigeminal Neuralgia Pain